Somaliland iyo DP World oo qoorta isla galay – Madal Furan
Hoy > Warka > Somaliland iyo DP World oo qoorta isla galay
Editor August 15, 2018 Warka 0
Hargeysa (Madal Furan) – Shirkadda DP World oo heshiis mudo 30 sanadood ah maamulka Somaliland kula gashay gacan ku haynta iyo horumarinta dekedda magaaladda Berbera ayaa waxaa soo wajahay dhibaato la xiriirta hirgelinta qaybo ka mid ah heshiiskii ay maamulka la gashay.
Waxaa dhamaaday xili mudadeedkii Halka sano ahaa ee shirkadda DP World ku ballanqaaday inay balaarin doonto dekedda magaaladda Berbera, waxaana xiligan ay shirkadu mar kale codsatay in mudo Laba sanadood ah loogu daro heshiiska balanfuryadu ku timid.
Ganacsatada wax kala soo degta dekedda magaaladda Berbera ayaa ka cabanaya dhibaatooyin xoog leh oo ka taagan dekedda Berbera mudadii ay gacanta ku haysay shirkadda DP World, uuna dildilaac ku yimid qaybo ka mid ah dekedda iyo iyadoo ay soo baxayaan cabashooyin la xiriira in shirkaddu ay dekedda dhexdeeda ku aastay sun.
Arrintu siday doonto ha ahaatee wararka hadda la helayo ayaa ah kuwo shirkadda DP World ay qoraal codsigooda mudo kordhinta ah soo marsiisay Madaxweynihii hore ee Somaliland Mudane Siilaanyo, kaasoo xiligii uu xukunka hayey ay shirkaduu heshiis la gashay, codsigooda ayay ku doonayaan inuu gar wadeen ka noqdo Mudane Siilaayo isla markaasna uu ogolaasho ka keeno Madaxweyne Muuse Biixi oo ah ninka xilka kala wareegay.
Xildhibaan Maxamed Faarax Qabile oo ka tirsan Xildhibaanada Somaliland ayaa sheegay in Mudane Siilaanhyo oo codsigaas u gudbiyey Muuse Biixi balse aan la ogeyn inuu ka aqbalay iyo in kale.
Warar u dhow dhow xarunta Madaxtooyada Somaliland ayaa sheegaya in Muuse Biixi uusan la dhacsaneyn hab dhaqanka Shirkadda DP World isla markaasna ay ku axdi furtay heshiiskii ay Somaliland horay ula gashay.
Maareeyaha dekedda Berbera ayaa saxaafada u sheegay in 40% dhaqaalaha ka soo xerooda dekedda Berbera uu sare u kacay muadii ay DP World gacanta ku haysay, balse uu dib-u-dhac ku yimid dhinaca hirgelinta horumarinta iyo mashaariicdii laga filayey shirkaddaas.
Waxaase soo baxay in kulankii arrinta shirkadda DP World ee dhex maray Siilaanyo iyo Muuse Biixi aysan mahadin shirkadda DP World, kadib markii uu Muuse Biixi si buuxda ugu gacan sayray codsiga shirkaddaas ee mudo kordhinta ah.
Kooxaha Mucaaradka ku ah heshiiska DP World, Somaliland iyo Itoobiya dhex maray ayaa horayba waxay ugu doodeen in aan wax natiijo ah oo la mahadiyo aan laga dhaxli doonin heshiiska mudada dheer ee Soomaaliland ay la gashay shirkadda DP World.
Madal Furan. com
Sawiro:- Madaxweyne Deni oo magaalada Qardho lagu soo dhoweeyey.
Akhriso: War murtiyeed laga soo saaray shirka Golaha Wasiirada Federaalka iyo Wasiirada Puntland